UDmitry Shepelev: ubomi bomntu namhlanje emva kokufa kukaJeanne Friske. Ubomi bomntu siqu kaShepelev, Instagram
Ubomi bomntu kaDmitry Shepelev & # 128152; & # 128152; & # 128152;
Umbonisi weTV, umboniso kunye nomntu wexesha lokuzonwabisa uDmitry Shepelev unxulumene nababukeli beTV abanomotheka ovulekileyo, amehlo enomdla, ihlaziya elimnandi ... Wayesoloko enenhlanhla emsebenzini wakhe, amantombazana awazange agxothwe, kwaye intsebenziswano noZhanna Friske yavusa umona phakathi kwabalingane bakhe. Kodwa ubomi bulungiselele intlungu enkulu ngenxa yeso sihlandlo! Emva kokufa komfazi wakhe womtshato, uDmitry uqala ukufunda ukufunda nomntwana omncinci ezandleni zakhe.
Kuqala ukupapashwa kwezithombe zikaJeanne Friske kunye nendodana yakhe, khangela apha .
Ngubani uShepelev odibana naye phambi koJeanne Friske
Ubomi bomntu waseBelarusian obumnandi uDmitry Shepelev wayoloko ekholisa abafazi. Umntu othandekayo, ukumomotheka kwi-screen yeTV, wayenandipha intliziyo yentombazana enye. Umnumkeli wokuqala weTV wadibana nomdla wakhe wokuqala esikolweni: ummelwane kwideskiti uKaty Kolesnikova waba yintombazana yokuqala yaseDima. Kodwa ngenxa yokufayilila kwincwadana yentsha yaseBelarusian, umdlali we-novice akazange ahlawule ngokwaneleyo intombazana, kwaye isibini saqhekeza.
Inomxholo enzulu yayiseShepelev kwiminyaka yakhe yokufunda. Kwaphela iminyaka engama-7 wadibana no-Anna Startseva. Incwadana iphelile ngomtshato ... Kwiiveki ezintathu emva komtshato, abasanda kutshata baqhawule, kunye noDima baya eKiev.
Ukuthanda ibali likaJeanne noDmitry
Amahemuhemu athi uDmitry Shepelev noZhanna Friske baqala ukudibana no-2012. Okokuqala, umbonisi akazange avume kule nto waza watshela ababhali beendaba ukuba ubuhlobo bakhe nomculi - nje ngu-PR. Kwaye iifestile ezimelelwe ecaleni kweJeanne onolwazi akuyona inkwenkwana, kodwa indoda eyomeleleyo neyityebi.
Emva kwexesha elithile, ipaparazzi yaqaphela umculi we-singer - kwaye isibini sasiyeke ukufihla ubudlelwane.
Njengoko kwavela, uJeanne noDima badibana kunye nesethi yenkqubo yomculo "Ipropati yeRiphablikhi". Umbonisi onobukrakra ngokukhawuleza wayethanda umculi, nangona wayemncinci ngaphezu kweminyaka eyi-10. Abafayo bakhathazekile ngombuzo: Ngaba kuya kuba nomtshato? Kwisinye sezidliwano-ndlebe ezinombuzo othi "Kulungile!", Umbonisi weTV uthe akazange akhuphe ukubeka isitampu esitsha kwipasipoti yakhe, njengoko umtshato ongaphambili wawungaphumelelanga.
UJeanne Friske akazange afihla ukuba wayekulungele ukushiya umsebenzi ngenxa yendoda ethandekayo. Ukufunda ngokukhulelwa, waqala ukuthetha kangangoko, akazange avele kwimibutho yelizwe, kwaye emva kwexesha walala kwintsimi yomboniso. Ngo-Ephreli 2013, uJeanne wazala unyana kaPlato. Kodwa emva kwesiganeko esivuyisayo, ngokukhawuleza kwafika buhlungu: oogqirha bafaka umculi ukuba uhlalutyo olubi-ingxaki yokuphefumula kwengqondo.
I-Shepelev yachithwa phakathi kwesibhedlele apho uJeanne wayelele khona kwaye esebenza, ezama ukufumana iindlela zokunyanga okuninzi. Abamangalisi abaninzi bomculi bacaphukisa i-Instagram Shepelev, apho uDmitry wabonisa khona "iingubo" ezivela kwimifanekiso yokuzonwabisa kunye nemikhosi. Kwesinye sodliwano-ndlebe, uShepelev uvume ukuba umsebenzi wakhe "u-lifebuoy", uvumela ubuncinane ukuphazamiseka okuncane kumbandela onzima.
UDmitry de umzuzu wokugqibela ukholelwa ukuba uJeanne uya kubuya. Wathi ngelusuku lokuzalwa lomculi wamnika isandla kunye nentliziyo. Lo mbhangqwana waphupha umtshato omhle xa eso sifo saphela. Abathandana banokutshintshela amasongo, ukususela ngoko uShepelev wabiza uFriske umkakhe. Phantse iminyaka emibini umzabalazo wobomi wawuhlala. Ngelishwa, uJeanne wahluleka ukunqoba umhlaza.
Kutheni uShepelev engenayo ithuba lokutshisa uZhanna
I-Shepelev yayingekho kwiintsuku zokugqibela zobomi bentombi yakhe ethandekayo, yaxotha unyana wayo ukuba ahlale eBulgaria. Emva kweendaba ezibuhlungu, izigxeko zityholo zibetha umboniso: abalandeli bakaJeanne babengenakuqonda isizathu sokuba engenaye nomfazi wakhe ofa? Kamva uShepelev wathi ufuna ukulondoloza unyana omncinci kwizinto eziphazamisayo, ngoko wamthatha waya naye kwi-resort. Emva kokufunda iindaba ezimbi, walinda eBulgaria, xa uyise wayeza kuhlala nomzukulu wakhe. Ngako oko uShepeleva wayengenaso kwintlanganiso yokuhlaziya kunye nomculi eCrocus City, wakwazi ukuza kuphela kumngcwabo. Emva nje kokungcwaba uShepelev wabuyela eBulgaria waya ePlato.
Ubomi bomntu kaDmitry Shepelev emva kokufa kukaFriske
Emva kokufa kukaJeanne, umboniso waya kuye, engafuni ukunika udliwano-ndlebe kunye namazwana kumaphephandaba. Wayebona kuphela ukuba ubuhlobo babo nomfazi bakhe buhle:
"Sasikunye noJeanne kwaye sinovuyo nosizi. Saye noJeanne kunye nempilo, kunye nokugula. Oku kuchanekileyo ulwalamano olwenziwa ngabantu. Ungaphupha malunga nale nto, kodwa unokuphila njengale "
I-Shepeleva eyaziwayo ixhalabele kakhulu malunga nesimo sengqondo somculi. Umnumkeli weTV u-Andrey Malakhov uxele ngethuba lokuhlangana kunye noDmitry kwisikhululo se-Moscow. Ngokutsho kukaMalakhov, uDmitry wayebukeka njengendoda enekhwele enekhwele eneendvuvu. Wayekunye noPlato, owathi wabuyela eBulgaria. UShepelev watshela uMalakhov ukuba ufuna ukuyeka ukuhleba kunye nento yonke ekhumbuza ngentlekele.
Uphi iShepelev namhlanje?
Umlimi waseRashiya uEvgeni Fridlyand uthe wadibana noDmitry Shepelev noPlato kwisixeko saseBulgaria saseRavda kwi-Emerald Beach Resort kunye ne-Spa. UPlato wayehlala egcina isandla sikayise kwaye akazange afune ukuyeka umzuzu. UFridland ogama linguPlato ungumyeni oyinyani kwaye wathi uDmitry ulungele. Ngokomvelisi, uShepelev akayi ku-Intanethi kwaye akayi kubukela iTV, ezama ukulondoloza iingxaki zakhe kwiimvo ezingathandekiyo kunye nolwandle lwamanqaku malunga nokufa kukaJeanne. Ezinye iiveki ezimbalwa i-showman iya kuhlala eBulgaria kunye nendodana yakhe, ayibizi ngezinye izicwangciso zakhe.
U-Elena Temnikova waphinde wanywanteka
Iingxowa ze-ushokoleta kunye neembotyi kunye ne-avocado
Indlela yokukhetha umbala we-lipstick
Izindlela zokukhulelwa kwabafazi
I-Gypsy ukuqagela kwiinaliti "ikhowudi yothando" yindlela efanelekileyo yokujonga kwikamva
Inqanawa yakho ngaphandle kwegumbi lokuqina: imithetho emine elula
Amaqanda aseSanta Fe
Unyango lwezonyango zamalungu abantu
Umntu ozithandayo-intsingiselo yobomi, ngaba kuhle okanye kubi?
Indlela yokukhetha iingubo ezifanelekileyo zabantu abancinci
Ukukhuselwa kwesikhumba ngokubanda
Izindlela zokonyango kweempembelelo ezinobuncwane kwiimbrane ezinqabileyo
I-pie nge-sauerkraut kunye ne-sausages